Vicente del Bosque oo ka hadlay rajada ay kooxda Real Madrid ka qabi karto inay ku guuleysato horyaalka La Liga – Gool FM
(Real Madrid) 30 Nof 2018. Macalinkii hore xulka qaranka Spain Vicente del Bosque ayaa wuxuu xaqiijiyay in wali aysan iska luminin kooxda Real Madrid fursadii ay ugu guuleysan lahayd xili ciyaareedkan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Vinci del Bosque oo soo ahaa tababare kooxda Real Madrid ayaa ku adkeesanaya in Los Blancos ay fursad weyn u heysato ku guuleysiga xili ciyaareedkan horyaalka La Liga, maadaama farqiga dhibcaha u dhexeeya iyada iyo Barcelona uu gaarsiisan yahay kaliya 5 dhibcood.
“Real Madrid waxay ka hooseysaa Barcelona 5 dhibcood oo kaliya, si la mid ah 6 dhibcood kooxda hogaamineysa horyaalka ee Sevilla, waa farqi aan sidaas u weyneen, waxaana wali jira dhibco badan ay ku guuleysan karto Los Blacos”.
“Waxaa xili ciyaareedkan jira tartan xoogan ee ku aadan horyaalnimada, waana wax u wanaagsan kubada cagta Spain, waxaa jira kooxo aanan la fileynin inay qeyb ka noqdaan boosaska ugu sareeya ee dhanka kala sareynta horyaalka La Liga, waana wax u wanaagsan guud ahaan kubada cagta”.
“Real Madrid waxay ka mid tahay 6-da kooxood ee ugu sareysa adduunka, waxay heysataa ciyaartoy da ‘ayar ah ee aad u wanaagsan, waxay leeyihiin tababare weyn, ee diyaar u ah inuu sida ugu wanaagsan ku maamulo kooxdan weyn”.